Afrika Archive - Gool FM - page 2	twitter
AFCON 2017: Xulka Burkina Faso oo garaacay Ghana, kuna soo baxay kaalinta saddexaad ee koobka qaramada Afrika
(Libreville) 05 Feb 2017 – Xulka Burkina Faso ayaa ku soo baxay kaalinta saddexaad ee koobka qaramada Afrika kaddib guul 1-0 oo ay ka gaareen dhiggooda Ghana.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta waxaa dhammaadkii dheesha goolka ay guusha ku qaateen la yimid xulka Burkina Faso.
Goolka madiga ah ee ay xulka Burkina Faso ku mareen dhiggooda Ghana waxaa u dhaliyey 88’daqiiqo Alain Traore, waxaana uu ahaa 
AFCON 2017: Xulka Egypt oo iska xaadiriyey final-ka koobka qaramada Afrika, kaddib markii ay rigooreyaal ku reebeen Burkina Faso
(Libreville) 02 Feb 2017 – Xulka qaranka Egypt ayaa iska xaadiriyey final-ka koobka qaramada Afrika sanadkan 2017, kaddib markii uu rigooreyaal ku reebay dhiggiisa Burkina Faso.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Egypt ayaa la yimid goolka koowaad ee ciyaarta, waxaana u dhaliyey 66’daqiiqo xiddigooda Mohamed Salah.
Xulka Burkina Faso ayaa dhankooda iska soo guday goolkaas, waxaana goolka barbaraha u dhaliyey 73’daqiiqo Aristide Bance, kulanka ayaana 
AFCON 2017: Xulka Egypt oo u soo gudbay afar dhammaadka koobka qaramada Afrika, kaddib markii uu maquuniyey Morocco
(Libreville) 29 Jan 2017 – Xulka qaranka Ghana ayaa ku soo biiray xulalkii u soo baxay afar dhammaadka koobka qaramada Afrika sanadkan 2017, kaddib markii uu 1-0 ku garaacay dhiggiisa Morocco.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Egypt ayaa la yimid goolka qura ee ay uga badiyeen Morocco.
Goolka madiga ah ee ay wiilasha Masaaridu ku majo xaabiyeen Morocco ayaa yimid 88’daqiiqo dhammaadkii ciyaarta, waxaana u 
AFCON 2017: Xulka Ghana oo u soo gudbay afar dhammaadka koobka qaramada Afrika, kaddib markii uu garaacay DR Congo
(Libreville) 29 Jan 2017 – Xulka qaranka Ghana ayaa ku soo biiray xulalkii u soo baxay afar dhammaadka koobka qaramada Afrika sanadkan 2017, kaddib markii uu 2-1 uga badiyey dhiggiisa DR Congo.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Ghana ayaa goolka la horreeyey waxaana u dhaliyey 63’daqiiqo u dhaliyey Jordan Ayew, kaasoo kulanka ka dhigay 1-0 lagu hoggaaminayey DR Congo.
Xulka DR Congo ayaan sidaas ku 
GOOGOOSKA: DR Congo vs Ghana 1-2 (Ghana oo usoo gudubtey nus-dhamaadka)
Sadio Mané oo xalay ooyin jabsaday lana aamusin waayay balse taageerayaasha Liverpool ayaa aad ugu farxay…+MUUQAAL
(Gabon) 29 Jan 2017. Dhaliyaha kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa xalay ooyin jabsaday isla markaana la waayay bar loo aamusiyo kaddib markii oo rigoore ka khasaariyay xulkiisa Senagal oo ka haray tartanka koobka qaramada Afrika.
Xulka Cameroon ayaa u gudbay semi-final ka koobkan kaddib markii ay rigoorayaal 4-5 ku mareen Sengal.
Kaamirooyinka ayaa soo qabanayay Mane oo si daran u ooynaya oo xitaa la aamusin waayay, laakiin taageerayaasha Liverpool ayaa aad ugu farxay in xulka Mane laga soo reebo koobka qaramada Afrika.
AFCON 2017: Xulka Burkina Faso oo u soo gudbay afar dhammaadka koobka qaramada Afrika, kaddib markii uu garaacay Tunisia… + SAWIRRO
(Libreville) 28 Jan 2017 – Xulka qaranka Burkina Faso ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee u soo baxa afar dhammaadka koobka qaramada Afrika sanadkan 2017, kaddib markii uu 2-0 uga badiyey dhiggiisa Tunisia.
Kani waxa uu ahaa kulankii ugu horreeyay ee siddeed dhammaadka koobka qarammada qaarada Afrika 2017, waxaana guul gaaray oo u soo gudbay wareegga xiga ee afar dhammaadka xulka Burkina Faso shan dhibcood uga soo baxday guruubyada oo uu soo ciyaaray saddex kulan.
Dhinaca kale xulka Tunisia oo 6 dhibcood 
Kooxaha usoo gudbay wareega sideed dhammaadka koobka qaramada Afrika, sida ay isugu aadeen iyo goorta ay ciyaarayaan
(Gabon) 26 Jan 2017. Tartanka koobka qaramada Afrika ayaa soo gaaray meel dha-dhan leh iyadoo uu ka soo gudbay wareega group-yada.
Xulalka Burkina Faso, Tunisia, Senegal, Cameroon, DR Congo , Ghana, Egypt iyo Morocco ayaa u soo gudbay Quarter-Finals ama sideed dhammaadka tartanka.
Haddaba halkan ka aqriso sida ay kooxaha isugu beegmayaan iyo goorta ay ciyaari doonaan:
SABTI 28 Janaayo:
7:00 Habeenimo geeska Afrika Burkina Faso vs Tunisia.
10:00 Habeenimo geeska Afrika Senegal vs Cameroon.
AXAD 29 Janaayo:
7:00 Habeenimo geeska Afrika DR Congo vs Ghana.
Aubameyang oo u soo safray Jarmalka kaddib markii uu xulkiisa ka soo haray koobka qaramada Afrika
(Gabon) 26 Jan 2017. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dib ugu soo duulay dalka Jarmalka gaar ahaan kooxdiisa Borussia Dortmund kaddib markii uu xulkiisa Gabon isaga soo haray koobka qaramada Afrika oo ay marti galinayeen.
Aubameyang ayaa labo gool u dhaliyay xulkiisa saddex kulan balse midaa kuma filnaan inay ka hor tagto in marti galiyayaasha tartanka ay ku soo haraan wareega group-yada kaddib markii ay bar-baro galeen kulan kasta.
Xiddiga reer Afrika ayaa dayuurad gaar ah ugu soo safray Dortmund isagoona soo raaciyay qoraal 
AFCON 2017: Xulka Egypt oo garaacay Ghana una soo gudbay siddeed dhammaadka tartanka, halka xulalka Uganda iyo Mali ay barbaro galeen
(Libreville) 26 Jan 2017 – Xulalka Egypt ayaa 1-0 uga adkaatay dhiggiisa Ghana kulan ka tirsan qeybta D ee koobka qaramada Afrika waxaana ay iska xaadiriyeen siddeed dhammaadka tartankan, halka Uganda iyo Mali ay barbaro 1-1 ku kala tageen.
Xulka Masar waxa uu u baahnaa hal dhicib si uu ugu soo baxo kaalinta labaad ee Guruubka D, laakiin waxa uu guul ka gaartay caawa xulka Ghana oo mar hore xaqiijiyey inay u soo baxeen siddeed dhammaadka tartanka.
Egypt goolka madiga ah ee ay uga 